Kim Jong-un:- Waxaan Diyaar U ahay “Dagaal iyo Wada Xaajood “ | Gaaroodi News
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay inuu isku diyaariyo “wada xaajood iyo dagaal” lala galo Mareykanka, iyo “gaar ahaan inuu si buuxda isugu diyaariyo iska hor imaad”.
Tani waa markii ugu horreysay ee Kim Jong-un uu si toos ah uga hadlo maamulka Madaxweyne Joe Biden.
Kuuriyada Waqooyi ayaa goor sii horreysay gaashaanka u daruurtay dadaallada dowladda cusub ee Mareykanka ee lagu hirgelinayo wada hadallada diblomaasiyadeed.
Mareykanka ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso barnaamijkeeda hukliyeerka.
Balse xukuumadda Pyongyang ayaa dhowr jeer diidday, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo cunno qabateynno dhaqaale oo xooggan ku soo rogtay dalkaas ku yaalla koofurta Aasiya, sababo la xiriira tijaabooyinka nukliyeerka.
Kim ayaa ka hadlayay shir uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha sare ee dalkaas, oo toddobaadkan dhexdiisa ka bilowday caasimadda Pyongyang.
Wuxuu sheegay inay u baahan yihiin in “gaar ahaan si buuxda isugu diyaariyaan iska hor imaad, si loo dhowr sharafta dalka iyo danihiisa horumarka iyo madaxa bannaanida”, iyo sidoo kale n la “damaanad qaado nabad iyo ammaanka Kuuriyada Waqooyi,” sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ee KCNA.
Hadalkiisan ugu dambeeyay ayaa imaanaya maalmo ka dib markii uu si rasmi ah u ogaaday in Kuuriyada Waqooyi ay wajaheyso walaac la xiriira cunno yaraan.
Horraantii toddobaadkan, hoggaamiyeyaasha dallaka G7, oo uu ku jiro Joe Biden, ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso hubkeeda nukliyeerka iyo barnaamijka hubka, ayna soo celiso wada xaajoodka.
Xiriir dhiillo leh
Xiriirka Kim Jong-un uu la leeyahay maamulka Biden ayaa ilaa iyo hadda ahaa mid xiisad ay ku dheehan tahay.
Kahor doorashadii Mareykana, Biden ayaa ku tilmaamay in Kim uu yahay “tuug”, maalmo kahor caleema saarkiisa. Ka dib Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay dhoolla tus militari oo ballaaran kaas oo ay ku soo bandhigtay hub cusub.
Bishii April, Biden ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay in ay “khatar weyn” ku tahay ammaanka dunida, taas oo sababtay in jawaab caro ah ay ka timaaddo Pyongyang oo sheegtay in hadalkaas uu ka tarjumayo in Biden uu doonayo inuu “sii xoojiyo siyaasadda cadowtinnimada leh” ee ka dhanka ah dalkaas.
Xukuumadda Washington ayaa sidoo kale dhowaan dhammeystirtay dib u eegis ay ku sameysay siyaasaddeeda Kuuriyada Waqooyi, waxayna sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono dadaallada Gacanka Kuuriya looga dhigayo mid ka caaggan nukliyeerka.
Biden ayaa ballan qaaday in uu la imaan doono hannaan ku dhisan diblomaasiyad iyo iska caabbin.
Xoghayaha xiirirka Aqalka Cad, Jen Psaki ayaa tiri: “Siyaasaddeenna diiradda ma saari doonto in lagu guuleysto gorgortan, sidoo kalena kuma tiirsanaan doonto dulqaad istaraatiijiyadeed”.
Kim Jong-un ayaa saddex jeer oo kala duwan oo hore, la kulmay Madaxweynihii Biden xilka kaga horreeyay ee Donald Trump, balse wada hadallada ku saabsan joojinta hubka nukliyeerka ayaa fashil ku soo dhammaaday.
Leif-Eric Easley, oo wax ka dhiga Jaamacadda Ewha Womans ee Seoul, ayaa hannaanka Biden ku sheegay in uu yahay mid go’aannada Kuuriyada Waqooyi ka talo gelinaya xulafadiisa, isagoo u maraya hannaanka “diblomaasiyadda”.
“Maamulku ma uusan soo bandhigin hannaan faahfaahsan, sababtoo ah wuxuu doonayaa in si aan adkeyn loo wajaho Pyongyang,” ayuu yiri.
“Dhanka kale, Washington waxay xulafadeeda la xoojin doontaa hannaanka iska caabbinta, tababarka militariga, iyo difaacyada hubka.”
Falanqeynta Nari Kim, weriyaha BBC ee Laanta Kuuriya
Farriinta isku dhex jirta ee Kim Jong-un ee isu diyaarinta “wada xaajoodka iyo iska caabbinta” waxay ka tarjumeysaa hadallada Madaxweyne Biden, oo qaabka uu Mareykanka u wajahayo Kuuriyada Waqooyi ku sheegay in ay tahay hannaan ku dhisan “diblomaaisyad iyo iska cababin”.
Marka ay isku qastay labada farriin, Kuuriyada Waqooyi waxay ku taagnaaneysaa hannaankeeda ah sug-oo-arag ee la xiirira maamulka cusub ee Mareykanka.
Balse hubanti la’aanta farriinta Kim waxay sidoo kale calaamad u noqon kartaa in Kuuriyada Waqooyi ay rajeyneyso in ay dib ugu laabato wada hadal.
Inkastoo Kim Jong-un uu carrabka ku adkeeyay isu diyaarinta “iska hor imaad”, wuxuu ka gaabsaday inuu si toos ah u cambaareeyo Mareykanka amaba hadallo kale oo xanaf leh.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee uu sidaas u sameeyay ayaa laga yaabaa in ay tahay cunto yaraanta Kuuriyada Waqooyi iyo walaacyada la xiriirka xanuunka safmarka ah ee coronavirus.
Dhaqaalaha dalkaas waxaa saameyn ku yeeshay cunaqabateynta adag ee caalamka kuwaas oo la xiriira barnamaijkeeda hubka nukliyeerka iyo xiritaanka xudduuda, si looga hortago faafitaanka xanuunka.
Sidaas darteed farriinta uu dirayo hadalka Kim Jong-un waxay tahay in Kuuriyada Waqoyi ay muujineyso sida ay diyaar ugu tahay wada hadal, balse aysan marnaba aqbali doonin inay gebi ahaanba joojiso hubka nukliyeerka, sid uu dalbaday Mareykanka.
Muddada dhowna, faafitaanka COVID-19 iyo cunno yaraanta waxay dalkaasi ku qasbi doonaan inuu xoogga saaro arrimaha gudaha, beddelkii uu xoogga saari lahaa kuwa dibadda